Moments leh saaxiibo 47
Miyuu yahay microcosm of macrocosm, universe ee mugdiga ah? Hadday sidaas tahay, meerayaasha iyo xiddigaha muuqda waa inay ku jiraan isaga dhexdiisa. Halka ay ku yaalaan?
Fekeryahannada waqtiyo kala duwan iyo qaabab kala duwan, ayaa sheegay in duniddu ay sumcad ku leedahay dadka. Tusaale ahaan ama xaqiiq ahaan, tani waxay u badan tahay inay run tahay. Macnaheedu maahan in Caalamku leeyahay faraha iyo suulasha isla markaana uu xidho suno indhaha iyo timaha madaxa, ama in dunidaba loo dhisay iyada oo loo eegayo cabbirrada jidhka jirka ee imminka jira, laakiin waxay la micno tahay in hawlgallada adduunku ay ku sifoobi karaan oo muuqan karaan in nin by xubnaha iyo qaybaha. Waxyaabaha xubnaha jirka ka mid ah looma samayn inay buuxiyaan booska, laakiin inay ku qabtaan howlo gaar ah dhaqaalaha guud iyo samafalka jirka guud ahaan. Waxaa la mid ah ayaa laga dhihi karaa maydadka ku sugan bannaanka hore.
Nalalka iftiinka iyo iftiinka joogtada ah ee cirka ku jira ayaa ah warbaahin ay ciidamada dunidu ku dhex shaqeeyaan jidhka, marka loo eego sharciga caalamiga ah iyo daryeelka guud iyo dhaqaalaha guud ahaan. Xubnaha gudaha, sida xubnaha galmada, kelyaha, lafdhabarta, beeryarada, beerka, wadnaha iyo sambabaha, ayaa la sheegay inay yihiin kuwo isu-dheelitiran oo xiriir toos ah la leh toddobada meerayaasha. Saynisyahannada iyo sheekooyinka hal-abuurka ah ee Boehme, Paracelsus, Von Helmont, Swedenborg, falsafadayaasha dab-damiska iyo kuwa cilmiga barafka, ayaa magacaabay xubnaha iyo meerayaasha ku habboon. Dhammaantood ma bixiyaan isku-ekaansho isku mid ah, laakiin waxay isku raacsan yihiin inuu jiro tallaabo isku-celin ah iyo xiriir ka dhexeeya xubnaha iyo meerayaasha. Kadib markuu ka warqabo inay xidhiidh wada leeyihiin, ardaygu waa inuu, hadii uu rabo inuu ogaado, ka fakiro oo xaliyo unugyada u dhigma meerayaasha khaaska ah, iyo sida ay ula xidhiidhaan una shaqeeyaan. Kuma tiirsanaan karo miisaska dadka kale ee arrintan la xiriira. Miiska iswaafajinta wuxuu ku habboon yahay kan sameeyey; waxaa laga yaabaa inaysan run u ahayn mid kale. Ardaygu waa inuu helaa waxyaabaha u dhigma.
Adigoon ka fikirin feker, qofna waligiis ma ogaan doono sida walxaha caalamiga ah ay isugu egyihiin uguna xiriiraan qeybaha jirka ee qofka, waxkastoo ay dadka kale ka oran karaan. Fikirka waa in la sii wadaa ilaa maaddada la ogyahay. Maxaa u dhigma xiddigaha, xiddigga xiddigaha, nebulae ee ku jira booska, waxay u dhaqmaan jidhka ninku sida salxiryada, dareemaha ganglia, isgoysyada dareemayaasha. Qeybahaan ama isgoysyada jirka waxay soo saaraan iftiin, dareeme dareeme. Tan jannada waxaa looga sheegaa sida iftiinka xiddigaha, iyo magacyo kale. Tani waxay umuuqataa inay fogtahay oo ay u jecelyihiin cilmiga xiddigiska, laakiin hadii uu ku fikiro jirkiisa ilaa uu ka ogaanayo nooca xarumaha dareemeyaasha iyo hada, wuxuu badali lahaa aragtidiisa ku saabsan cilmiga xiddigiska. Wuxuu garan lahaa waxa xiddigaha jannada ku jira ay yihiin, oo uu awood ugu yeelan karo inuu uxirxado sida xargaha jirkiisa.
Maxaa loola jeedaa caafimaadka guud ahaan? Haddii ay tahay dheellitirka awoodda jirka ee maskaxda, maskaxda iyo ruuxaba, markaa miisaanku waa sidee?
Caafimaadku waa wada jir ahaan iyo caafimaad ahaanba jirka qaabkiisa iyo shaqadiisa. Caafimaadka guud ahaan waa hawl jirka ka mid ah oo loogu talagalay shaqooyinka loogu talagalay, iyada oo aan la carqaladeynaynin hawsheeda ama aan laxaad la'ahay qaybaha ay ka kooban tahay. Xoog ayaa la horumariyaa loona ilaaliyaa natiijada caafimaad. Awooddu ma aha wax ka baxsan caafimaadka, mana ka madax bannaan tahay caafimaadka. Caafimaadka waxaa ilaaliya awooda ama tamar soosaarka, iyo fal celin isdhaxgal ah oo udhaxeysa qeybaha jirka iyo jirka guud ahaanba. Tani waxay qusaysaa maskaxda iyo dabeecadda ruuxiga ah ee ninka, iyadoo lagu daro jirkiisa bini aadamka, sidoo kale nin xayawaan caadi ah. Waxaa jira caafimaad maskaxeed iyo mid ruuxi ahaaneed madaama uu jiro jir jireed. Caafimaadka oo dhan waa la ilaaliyaa marka qayb kasta oo isku-darka ah ay shaqadeeda ka fuliso ama wanaag u wada sameyso. Xeerka ayaa si fudud loo fahmi karaa laakiin way adag tahay in la raaco. Caafimaadka waxaa lagu kasbadaa oo lagu hayaa illaa heer qofku sameeyo waxa ugu fiican ee uu u garto inuu caafimaad helo, iyo wuxuu sameeyo waxa ugu fiican ee uu yaqaan si loo ilaaliyo.